Uyavutha uyise wengane ebizwe ngesilima | News24
Uyavutha uyise wengane ebizwe ngesilima
Durban - Uyaveva owesilisa waseNdabeni, eNgwavuma, enyakatho yeKwaZulu-Natal ngesenzo sikathishanhloko okuvela ukuthi ubize indodakazi yakhe eneminyaka engu-9 ubudala – efuna uGrade 4 – ngesilima ekilasini.
USfiso ‘Thokoza’ Mathenjwa, uthukuthele uyaqhuma ngenxa yento athi yenziwe nguThobile Siyaya onguthishanhloko waseNjakazane Primary School osolwa ngokubiza indodakazi ngesilima.
USiyaya usolwa ngokuthuka le ntombazane emasontweni amabili edlule. Kubikwa ukuthi ungene ekilasini lalo mfundi eyokhuza umsindo wafike wabuza ukuthi ngobani ababanga umsindo.
Ukhombe omunye umfundi ukuba abhale amagama azo zonke izingane ezibanga umsindo, wathi “ungasibhali lesi silima lesi”, esho ekhomba le ntombazanyana.
Mhlaka-5 kwephezulu, ILANGA libike kabanzi ngezinkinga ezibikwayo kulesi sikole lapho kunothisha abafake izincwadi zokushintshelwa kwezinye izikole ngoba bethi ngeke bakubekezelele ukuthakathwa ngabafundi.
Kuvele nokuthi kunabafundi abafakelwe ngomunye ushevu babuya esibhedlela. UMathenjwa uthi ngeke akuthole ukuthula enhliziyweni yakhe ngesenzo sikathishanhloko.
“Ngifuna ukumthathela izinyathelo zomthetho ngoba ukhombise ukungidelela. Noma ngabe unenzondo nami kakusho ukuthi sekumele ayedlulisele nasezinganeni zami.
OLUNYE UDABA: Owesilisa utshele umngani ukuthi ubulale indodakazi
“Akaqali ukuyenza le nto yakhe njengoba nangomunye unyaka wayenza le nto. Kulokhu ngiphoqelekile ukubakhipha abantwana bami ngibayise kwesinye isikole esiseduzane naso lesi,” kusho uMathenjwa.
Umthombo ongaphakathi esikoleni uthi uSiyaya ubize ingxenye yothisha waya nabo ekilasini wafika wabuza ukuthi yimuphi umfundi obizwe ngesilima, yaphendula indodakazi yaMathenjwa yathi iyona, ibizwe uSiyaya.
“Lapho uthishanhloko uvele weswela ngisho umgodi wokucasha ngoba ingane imtshele kwezikabhoqo ukuthi uyibize ngesilima. Sishubile isimo lapha esikoleni, abanye basikaza ukukhipha izingane zabo bayozicelela kwezinye izikole ezingomakhelwane.
“Badinwa yisenzo sikathishanhloko nesigungu esilawula isikole ngokuthi kabawabizanga amaphoyisa ukuba ayophenya ngoshevu odliwe yizingane zabo. Nalabo thisha abafuna ukuhamba kabamile,” kusho uMthombo.
Eziphendulela uthishanhloko, usiyaya, uthe kakulona iqiniso ukuthi ubize ingane ngaleli gama futhi yena akazi ukuthi unenzondo noMathenjwa.
Okhulumela uMnyango weMfundi KWaZulu-Natal, uKwazi Mthethwa, uthe kuyichilo ukuthi uthishanhloko angabiza ingane ngegama elifana naleli.